sawehlor: အမုန်းမီးတွေ မပွားပါစေနဲ့
ရပါတယ်ကွာ.......ရပါတယ် မင်းသွားချင်ရင် သွားလိုက်ပါ ငါနေခဲ့ပါ့မယ်။ မင်းပျော်မယ်ထင်ရင် လုပ်လိုက်ပါ ငါအားပေးပါတယ်။ ဒီလို့ အချိန်တွေ ဒီလို့ နေ့ တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ငါကြိုသိနေပါတယ်။ မင်းသဘောပါကွာ မင်းလမ်း မင်းလျှောက်စမ်း.. ငါ့လမ်းကိုလည်း ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ငါဆက်လျှောက်မယ်။ မင်းရဲ့ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ ငါသိလိုက်ရတဲ့အချိန် မှာ မင်းကို......အရမ်း မုန်းမိတယ်။ ◘◘◘◘◘
မုန်းတယ်......မုန်းတယ်ကွာ မင်း....မာယာများတယ် အကြင်နာတွေနဲ့.....အနိုင်ကျင့်တယ်။ ငါ့ကို......ရက်စက်တယ်။ အချစ်အကြောင်းကို နားမလည်တဲ့.....ငါ မင်းက ချစ်တတ်အောင်..........သင်ပေးတယ်။ အကြင်နာတွေမရှိတဲ့......ငါ ၊ မင်း.........ကြင်နာတတ်အောင် ပြုစားတယ်။ ခုတော့ ငါ့မှာ....မင်းကိုအမုန်းမီးတွေ လောက်မြိုက်နေပြီး။ မင်း......သိလား။ ◘◘◘◘◘ စိတ်နာတယ်ကွာ.....စိတ်နာတယ် မင်းနဲ စတွေ့ခဲ့တဲ့ နေရာလေးကို စိတ်နာတယ်။ မင်းနဲ့ ငါက ရည်းစားလည်းမဟုတ် ချစ်သူလည်း မဟုတ် ခဏတာတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ လိမ်ညာခြင်း နဲ့ခင်မင်မှု့အိုကွာ ဒီဘဝမှာ မင်းနဲ့ အဝေးဆုံး နေရာမှာနေမယ်။ အမုန်းကိုရင်ဖွင့်ခံစားချက်ကို နေရာပေးပြီး ဒီဘဝတော့ ...မင်းနဲငါ ဒီမျှပဲပေ့ါ မင်း.....သိထား မင်းကို ဂရုစိုက်မိတာ မင်းရဲ့အချစ်ကို လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူး.. မင်းရဲ့ သံယောဇဉ်ကို တောင်းတနေတာ မဟုတ်ဘူး.. လက်တွေ့ဘဝမှာ မင်းက ဆရာမကြီးပေါ့။ ဒါပေ့မယ် မင်းဘယ်လောက်ဆရာမကြီးဖြစ်နေ နေ.. ငါ.........လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး တစ်ခုတော့ပြောနိုင်တာရှိတယ်...မင်းကိုနောက်ထက် ဘယ်သူကမှ ထက်ပြီး အမုန်းမီးတွေ မပွားပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်။ ◘◘◘◘◘ ဒီလို့ နဲ့.... ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး ဝေးခဲ့ပြီး နစ်တွေကြာလာခဲ့တယ် အချိန်တွေနစ်တွေသာ များလာတယ် ကောင်လေးအမုန်းတွေ ကောင်မလေးကိုထက်ပြီး တိုးတိုးလာတယ် ဘယ်တော့ များမှ အမုန်းမီးတွေ ဖြေဖျောက်နိုင်မှာလဲ.....??? ♥♥ အချစ်ဆိုတာ လက်တွေ့ ဘဝမှာ တစ်ဘက်လူကခံစားရတာဖြစ်ဖြစ် နစ်ယောက်လုံး ခံစားရတာဖြစ်ဖြစ် အချစ်ရဲ့ချိုမြိန်ခြင်းတွေ ခံစားရစဉ်ခဏတော့အရမ်းကိုနုညံတယ်။ အရမ်းကိုနွေးထွေးတယ်။ အချစ်ကနေ အမုန်းတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ရင်ကွဲမတက် ခံစားရတယ်။ တကယ်တမ်း အချစ်ကြောင့်ပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အမုန်းကြောင့် ပူလောင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ခြင်းက တူညီပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် ပျော်ရွှ့င်ရတာလည်း သာယာတဲ့ ကြင်နာခြင်းမျိူး အမုန်းကြောင့် နာကျင်ရတာလည်း သံယောဇဉ်ကြောင့် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အမုန်းမီးမျိုးပေါ့။ ♥♥ အချစ်စစ်အချစ်မှန် ဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလာလို့ မေးလာရင် ရှိတော့ရှိမယ် ဒါပေ့မယ်...? အချစ်စစ် ဆိုတာဘာလဲ...? အချစ်စစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်ပေးနိုင်ရမယ်။ တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို အတူတူ မျှဝေခံစားပေးနိုင်ရမယ်။ အချစ်မှန် ဆိုတာဘာလဲ.....? အချစ်မှန်ဆိုတာ ကိုယ်ကချစ်နေရင် တစ်ဘက်သတ်ချစ်နေရ ကိုယ်ကပဲလိုက်ရော ပေးနေရတယ်။ သူကကိုယ့်ကို ဘာမှ လိုက်လျှောခြင်းတွေ မရှိဘူး။ သူကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးတယ် ကိုယ့်ကိုကျတော့နည်းနည်းလေးမှ မလှည့်ကြည့်ပေးဘူး။ ဘယ်လို့ ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်ကအချစ်မှန်နဲ့ ချစ်နေမိပြီးဆိုတော့သူကိုနားလည်ပေးနိုင်ရမယ်။ ♥♥ မမေ့နိုင်တဲ့အမုန်း ထာဝရအမုန်းမီး မမေ့နိုင်တဲ့အမုန်းဆိုတာမျိုးက သူနဲ့ သံယောဇဉ် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်တွေ တော်တော်ကြာခဲ့တယ်။ သွားတူလာတူနေခဲ့တဲ့ သူမျိုးကိုမုန်းတဲ့ အမုန်းမျိုး သူသွားခဲ့တဲ့ နေရာတွေ အတူတူစားခဲ့တဲ့ အစားအစာတွေကို သတိရနေတဲ့ အမုန်းမျိူး လူတွေရှေ့မှာ မုန်းတယ်ပြောနေပေမယ့် သူရင်ထဲမှာ....... တကယ်မေ့မရလို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သတိရနေတတ်တာ ကို မုန်းပေးနေတာ.......မမေ့နိုင်တဲ့ အမုန်းပေါ့ ♥♥ ထာဝရအမုန်း ဘယ်တော့ မှသတိမရဘူး။ သူရှိတဲ့နေရာ သူစားတဲ့ အစာစားတွေကို လုံးဝလှည့်မကြည့်ပဲ ဝေးဝေးနေတယ်။ သူ့ထက် ငါပိုမုန်းနိုင်တယ်ဆိုပြီး မာန်မာနတွေထား...အမုန်းမီးတွေ တောက်လောင်နေတဲ့ ထာဝရအမုန်း ♥♥ အချစ်ဆိုတာ တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ လိမ်ညာပြီးချစ်ရင် ကိုယ်တကယ်ချစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ 1500ဆိုတဲ့ အချစ်စစ်က သင့်ကိုမျက်နှာသာ မပေးတော့ဘူး။ ကိုယ်ကျိုးတွေနည်းကုန်ပြီး စိတ်ဒုက္ခလှလှကြီးရပြီး.... အရူးတစ်ယောက်လို့ဟိုးသွားရမလို့ဒီသွားရမလို့နဲ့စိတ်ဖေါက်ပြန်သွားနိုင်တယ်။ ♥♥ တကယ်တမ်းလူလောကကြီးမှာ အချစ်ကိုရိုးရိုးလေး ချစ်နေရင် နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ဓတ်မျိုတွေရှိနေခဲ့ရင် အမုန်းဆိုတာ ဖြစ်မလာတော့ ဘူုး။ ကိုယ်ကချစ်တာသေချာရင် သူကိုဂရုစိုက်ပေါ့... သူအကြိုက်ကိုလိုက် သူဖြစ်ချင်တာ ဖြည့်ဆည်းပေး ဒါပေ့မယ် ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့တော့ လိုမယ်။ အချစ်ခံရတဲ့ကလည်း (သူငါကိုချစ်နေတာပဲ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်။ သူကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ မကျေနှပ်ရင် လမ်းခွဲလိုက် သူ့ထက်ချစ်တက်တဲ့သူကို တစ်နေ့နေ့တော့ ငါတွေ့ မှာပဲဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့ သူ့ကိုဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုပဲ လုပ်နေတဲ့သူတွေ တကယ်အချစ်စစ်ကို လိုချင်တောင်းတလာရင် မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ♥♥ အချစ်စစ်နဲ့ မတန်တဲ့ သူတွေကို အချစ်ကိုဖန်ဆင်ပေးတဲ့ အချစ်မြှားနတ်မောင်က သင့်ကို မာယာများသော ၊ ရက်စက်သော ၊ လိမ်ညာခြင်း နဲ့ အချစ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သင့်ဟာ အချစ်ပင်လယ်ပြင်ကြီး မှာ မေခလာလည်းမကယ်နိုင်တော့ ဘူး။ သင့်တစ်ယောက်ထဲ လက်ပစ်ကူးပေတော့... သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကိုယ့်ကိုအချစ်စစ်နဲ့ ချစ်နေတဲ့ သူကို ပြန်လည်ချစ်ပေးပါ။ ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ကြင်နာယုယပေးပါ။ တစ်ဘဝမှာ တစ်ယောက်သာ ချစ်တက်ကြပါစေ။
Posted by saw ehlor at 09:52